काठमाडौँमा अघिल्लो चुनाव र यसपालिको चुनावको ‘ट्रेन्ड’ मा के फरक छ? – MySansar
अघिल्लो पटक हावा चलेको थियो, अहिले हुरी चलेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको चुनाव र अहिले भएको चुनावको मतपरिणामलाई सजिलो भाषामा बुझाउन यही उदाहरण उपयुक्त होला। अघिल्लो पटक दुई नयाँ दल विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना र साझाकी किशोर थापाको हावा चलेको थियो। राम्रैसित हल्लाएको थियो त्यो हावाले पनि। यस पटक भने बालेन नामको हुरी चलेको छ, जसको शक्ति त्यो हावाभन्दा बढी छ।
मत गन्न थालेको चार दिन पूरा भइसक्दा अघिल्लो पटक पनि सुरुको मतगणनामा रञ्जु दर्शनाले धेरै भोट ल्याउँदा विद्यासुन्दर पछाडि परेका थिए भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखियो। तर यो सही होइन। अघिल्लो चुनाव र यसपालिको चुनावमा आइरहेको मतपरिणामको ‘ट्रेन्ड’ नै फरक छ।
पाँच दिनको मतगणनाको ट्रेन्ड
यो अघिल्लो चुनावको पाँच दिनको मतगणनाको ट्रेन्ड हो। त्यसबेला पनि अहिले जस्तै वडा नम्बर १ र ३२ को मतपेटिका खोलेर गन्न थालिएको थियो। सुरुवाती मतपरिणाममा कांग्रेसका राजुराज जोशी, विवेकशीलकी रन्जु दर्शना र साझाका किशोर थापाको मत उस्ताउस्तै जस्तो थियो। तर एमालेका वडाध्यक्ष विजयी भएका यी वडाहरुमा सुरुदेखि नै एमालेका मेयर उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले अग्रता कायम गरेका थिए। त्यो अग्रतालाई उनले पछिसम्म नै कायम राखे। बीचमा एक दिन केही घण्टा कांग्रेसका राजुराज जोशीले अग्रता लिए पनि त्यो दिनको अन्त्यसम्ममा पुनः एमाले नै अग्रस्थानमा आएको थियो।
माथि नै भनिए जस्तो यसपालि बालेनको हुरी आएको छ। अहिलेसम्म एक पटक पनि बालेनले अग्रता गुमाउनु परेको छैन। सुरुको मत गन्न थालेदेखि चौथो दिनको अन्त्यसम्म बालेनले अग्रता मात्र कायम गरेका छैनन्, मत अन्तर पनि बढाउँदै लगेका छन्।
भरतपुर महानगरपालिकामा बरु रेणु र विजयको कडा प्रतिस्पर्धा भएको छ। थोरै मतअन्तरले कहिले एक जना अगाडि हुने त कहिले अर्को भइरहेको छ। तर काठमाडौँमा त्यस्तो अवस्था छैन।
सुरुमा १ र ३२ वडाको मात्र मत गन्न थालिए पनि अहिले १ र २ को नतिजा आइसकेर ३,४,५,६ र २९,३०,३१, ३२ वडाको मतगणना जारी छ। यिनै वडाको मतगणनामा अघिल्लो पटक विद्यासुन्दरले अग्रता बनाएका थिए भने रन्जु र किशोरले पनि आफ्ना भोट प्रशस्त बढाएका थिए।
अहिले यी वडाहरुमा झण्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी भोट बालेनलाई गएको छ। फलस्वरुप उनले अग्रतासँगै मतअन्तर पनि बढाउँदै लगेका छन्। हाल भइरहेको मतगणना मध्ये परम्परागत रुपमा एमालेलाई मत दिने वडाहरुमा वडाध्यक्षमा सूर्यलाई मत गए पनि मेयरमा लौरोमा भोट गएको देखिएको छ।
चौथो दिनमा आएर अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले वडाको टिम जितेको वडा नम्बर २९ र ३० मा पनि गणना थालिएको छ। ती दुवैमा पनि बालेनकै अग्रता छ।
चौथो दिनको अन्त्यसम्ममा बालेनले केशव स्थापितसँगको मत अन्तर ५ हजार पुर्‍याइसकेका छन्। तर पनि एमाले र कांग्रेसले कोर एरियाको वडामा आशा रहेको बताइरहेका छन्। तर मत अन्तर हेर्दा कोर एरियाका कम मत खसेका दुई वटा वडा बराबरको मत अन्तर भइसकेको छ। अर्थात् ती वडामा बालेनलाई सून्य मत नै आए पनि अरु उम्मेदवारहरुबीच भोट बाँडिदा फेरि पनि बालेनको मतसँग बराबरी हुन सक्दैन। फेरि, हुरी चलेको हो भने त्यसले कोर एरियालाई मात्र नछुने भन्ने होला जस्तो लाग्दैन।
सामाजिक सञ्जालको प्रभाव मतपत्रमा परिणत हुँदैन भन्ने मिथ भत्किए जस्तै कोर एरियाको रैथाने भोट पार्टीलाई जान्छ भन्ने मिथ भत्किन पनि सक्छ। यसपटक फेरि कोर एरियामा अभियन्ता तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार सुमन सायमीको पनि निकै प्रभाव छ जस्तो देखिन्छ। उनले पाउने भोटले सुमनलाई विजय त गराउँदैन नै, केशव स्थापित र सिर्जना सिंहको यात्राको साटो बालेनको यात्रालाई नै सहज बनाउने देखिन्छ।
यद्यपि, अहिलेसम्म बाहिरी एरियाकै मतगणना सकिसकेको छैन। र, चौथो दिनको अन्त्यसम्ममा १६ प्रतिशत मत मात्रै गनिएको छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी मत गन्न बाँकी नै रहेकोले अहिले नै यसै हुन्छ भनिहाल्न भने हतार हुन्छ।
यद्यपि मत अन्तरको फराकिलोपनाले गर्दा उपमेयरमा सुरुमा स्वतन्त्र पछि एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी सुनीता डंगोल निर्वाचित हुने लगभग निश्चित झैँ देखिन्छ।
हालसम्मको मतगणना र विगतको ट्रेन्ड हेर्दा बालेनकै विजयको सम्भावना देखिए पनि ठूलो संख्यामा मत गन्न बाँकी रहेकोले केही शंका भने रहन्छ। तर त्यसका लागि पाँचौँ दिनदेखि बालेन र अन्य प्रतिस्पर्धीबीच मत अन्तर उल्लेखनीय रुपमा घटेको देखिनु पर्छ। पाँचौँ दिनदेखि नै मत अन्तर नघट्ने र उल्टो बढिरहने हो भने यसपालि यो हुरीले सूर्यलाई छेकेर रुख ढाल्ने निश्चित हुनेछ।
अघिल्लो र यसपालि के-के फरक?
अघिल्लो चुनावमा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले सुरुदेखि नै लिड गरेको थियो। यस पटक स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले सुरुदेखि नै लिड गरिरहेका छन्।
अघिल्लो चुनावमा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा थियो, यस पटक कांग्रेस सुरुदेखि नै तेस्रो स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ।
अघिल्लो चुनावमा पनि सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग भएको थियो। तर त्यतिबेला टिकटक थिएन।
अघिल्लो चुनावमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा विवेकशील र साझा गरी दुई पार्टीका उम्मेदवार थिए। यस पटक विवेकशील र साझा एकीकृत भएर पनि फेरि फुट भएको छ। विवेकशील साझाकी मेयर उम्मेदवार समीक्षा बाँस्कोटाले निकै कम भोट पाएकी छिन्। यसपालि वैकल्पिक उम्मेदवारका रुपमा आफू एक्लो भएको मेसेज दिन बालेन सफल भएका छन्।
अघिल्लो चुनावमा चार दिनमा १९ हजार ७३८ मत गनिएको थियो भने यसपालि चार दिनमा ३० हजार ८३९ मत गनिसकिएको छ।
अघिल्लो चुनावमा मतपरिणाम आउँदासम्म दैनिक औसत १५ देखि २० हजार मत गनिएको थियो। यसपटक चार दिनको औसत निकाल्दा ७ हजार ७ सय मात्र हुन आउँछ।
अघिल्लो चुनावमा कूल खसेको मत १ लाख ७२ हजार ६८३ थियो। यस पटक १ लाख ९१ हजारभन्दा बढी मत खसेको छ।
यसपालि १५ मे (आइतबार) वडा नम्बर १ को र १६ मे (सोमबार) वडा नम्बर २ को परिणाम सार्वजनिक भयो। अघिल्लो पटक पनि गन्न थालेको दोस्रो दिन वडा नम्बर १ को र तेस्रो दिन वडा नम्बर २ को परिणाम सार्वजनिक भएको थियो।
अघिल्लो पटक पूरा नतिजा आउन १४ दिन लागेको थियो।